विभिन्न राजनीतिक समस्या र हाल को वर्ष को दुखद घटनाहरु भए तापनि ओडेसा को "समुद्र को मोती" हुन र यहाँ दुवै युक्रेन संग र नजिकै र टाढा विदेश बाट आराम गर्न बगालको जारी छ। छैन त लामो पहिले शहर धेरै prettier छ विशेष गरी देखि, त्यो आफ्नो पुरानो दुनिया आकर्षण गुमाएको छ छैन, र पनि फैशन भू-मध्य रिसोर्टमा एक patina प्राप्त। यो छुट्टी "सस्तो र हँसिलो" को सोभियत शैली यहाँ उद्धृत गरेको छैन र समुद्र स्विमिंग पूल, ग्लास लिफ्टहरु र सुरु देखि काठ को फर्श संग एक लक्जरी जटिल मा निर्माण गरिएको छ भने गर्न सकिन्छ।
निस्सन्देह, निजी क्षेत्र, उपचार sanatoriums र बोर्डिङ आवास परम्परागत र थप मा लोकप्रियता को स्तर को शीर्ष मा हो, तर धेरै पर्यटकहरु चयन अर्थव्यवस्था वर्ग को होटल। ओडेसा होटल सस्ती र सुविधाजनक - यी यस्तो बाँकी लागि आधारभूत मापदण्ड हो। तसर्थ, यो समीक्षा "भिक्टोरिया" जस्ता एक रोचक होटल, साथै यो वर्ग को धेरै अन्य परिसर समर्पित हुनेछ।
लोकप्रिय बजेट होटल
समय मा जान्छ, हामीले यो र पर्यटक पूर्वाधार आशा गर्नु हुँदैन। विशेष गरी ओडेसा जस्तै शहर मा। हालैका वर्षहरूमा, आराम सबै आधुनिक आवश्यकताहरू पूरा जो मिनी-होटल, धेरै त्यहाँ देखा, र आगंतुकों पागल पैसा संग लड्न एकै समयमा। यो सबै माथि, "अलाड्डीन", "अन्ना मारिया", "लहर", "टोक्यो तारा", "Deribas" र अरूलाई।
र के ओडेसा मा एक परम्परागत होटल जस्ता कुरा बारे? सस्तो र यस्तो विकल्प पाउन सकिन्छ, तपाईं मात्र कहाँ हेर्न जान्नु आवश्यक छ। तर धेरै मानिसहरू अहिले पनि शहर को रहस्य संरक्षण कि पुरानो लक्जरी भवन रुचाउँछु। जस्तै "काला सागर" को रूपमा होटल, "भिक्टोरिया", "केन्द्रीय", मात्र तपाईं आर्थिक र सहज छुट्टीको खर्च गर्न, तर पनि शहर को इतिहास को एक ज्ञानले ओडेसा को रिसोर्ट को आकर्षण संयोजन गर्न प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक व्यापार यात्रा वा व्यापार मा जान राम्रो पनि छ। कम से कम, त्यसैले यहाँ बसे गर्ने पर्यटक धेरै भन्छन्।
यो रिसोर्टमा पहिलो सुन्दर होटल को एक होटल "मास्को" (ओडेसा) थियो। पूर्व होटल को निर्माण वास्तुकला को एक स्मारक मानिन्छ। यो प्रारम्भिक बीसौँ शताब्दीको "चिया राजा" बनाइएको थियो। "ठूलो मास्को" होटल अझै पनि भनिन्छ। यो पनि ती समयमा यो पहिलो-क्लास होटल छलफल भएको थियो, तर महंगा गर्न विशेष हौं थिएन रोचक छ। उनको विचार मा आराम शानदार गर्दा।
भवन नै एक रोचक आकार ठूलो Windows र उत्कृष्ट moldings संग, "आधुनिक" शैली मा, सुन्दर छ। सोभियत समयमा त्यहाँ मीठो किनमेल र एक सिनेमा र 2006 मा बुझे होटल पुनर्स्थापना परियोजना मा सबै भन्दा राम्रो थियो। तसर्थ, भविष्यमा हामी हेर्न सम्भावना एक फैशनेबल पाँच-तारे जटिल छ। 59 कोठा, conservatory र छत मा एक जाडो बगैचा, अपार्टमेन्ट को तेजस्वी सौन्दर्य - यो सबै भविष्यमा अतिथि पर्खिरहेको।
होटल "केन्द्रीय" (ओडेसा)
यो रोचक होटल यसको नाम सम्म जीवित। साँच्चै, धेरै धेरै यहाँ केन्द्रिय! तपाईं केवल पसलमा वा समुद्र तट मा कोठा छोडेर, आफ्नो peculiar जीवन र रोचक स्मारक प्रशंसा, शहर भ्रमण गर्नेछ। आखिर, होटल को हृदय छ "दक्षिण Palmyra।" यसको कोठा केही गिरजाघर वर्ग को दृश्य प्रस्ताव। यो होटल "केन्द्रीय" (ओडेसा) अन्तिम शताब्दीको सुरुमा privechala छ, प्रसिद्ध अभिनेत्री वेरा चिसो, यहाँ आउनुभएका फिल्म "प्रेम को दासलाई" गोली।
राम्रो स्थान र होटल को राम्रो प्रतिष्ठा यस्तो एलिभेटर को कमी रूपमा यसको कमीकमजोरी उद्धार। आखिर, सबै कोठा निर्माण को दोस्रो तल्ला मा हो, र तल, राम्रो पुरानो दिनमा, पसलहरूमा अवस्थित छ। र व्यापार वर्ग (दुई-बेडरूम सूट, पाँच अतिथि लागि डिजाइन), र अप गर्न 50 मीटर को अपार्टमेन्ट, र "मानक" र "अर्थव्यवस्था" - कोठा फरक विभाग प्रदान गर्दछ। सुइट्स र "उच्च" ठूलो आधुनिक भर्नको छ - "प्लाज्मा", उच्च गतिको वाइफाइ, वातानुकूलन, रेफ्रिजरेटर ... स्तर पनि सबै सुविधाहरु र त्यहाँ तीन प्रत्यक्ष अतिथि छन्। तर, कोठा को सबै वातानुकूलन छ। एक कोठा "अर्थव्यवस्था" प्रस्ताव अतिथि साझा सुविधा वा ब्लक को प्रयोग। तथापि, कोठा को यस श्रेणी लागि दर धेरै व्यावहारिक छन् - दुई सय साठी रिव्निया देखि।
नजिकै होटल धेरै क्याफे, जो एक हो - "भुट्नु-ऊंची उडान भरना" खाना सेवा, आरामदायक वातावरण र घर खाद्य खाना को लागत दावा।
यो होटल पुरानो भवन होइन। एघार आधुनिक होटल "काला सागर" (ओडेसा) को Richelieu सडक मा, स्टेशन बाट धेरै टाढा छैन। तसर्थ, शहर र यस्तो "Langeron" वा "आनन्द" रूपमा तटों, नजिक ट्राम द्वारा पुग्न सकिन्छ। एक मानक कोठा - होटल यसको लाइसेन्स डेटाबेस को मुख्य सामग्रीहरू, धेरै महंगा छैन। 137 को कुल होटल को कोठा मा बाँकी - अपार्टमेन्ट, जूनियर सुइट्स र सुइट्स। समग्रमा, आवास को लागि 216 सुझावहरू। तर हरेक अतिथि कक्ष, मुक्त वाइफाइ, टिभी, वातानुकूल, आधुनिक सुविधाहरु, र सबै अतिथि मा भित्री स्विमिंग पूल प्रयोग गर्न योग्य छन्। त्यहाँ दुई राम्रो रेस्टुरेन्ट छन् - "। अस्टोरिया" "काला सागर" र
तपाईं बिरालो वा कुकुर देखि ओडेसा आउन निर्णय भने, होटल अतिरिक्त शुल्क यस लागि चार्ज गर्दैन। मानक कोठा को लागत सात सय रिव्निया गर्न छ छ। होटल "काला सागर" (ओडेसा) सजिलो र कडा थिएन शहर को सबै भन्दा प्रसिद्ध स्थलहरुको लागि हिंड्न रूपमा यस्तो तरिकाले प्रबन्ध छ।
"भिक्टोरिया" - स्थान र सामान्य जानकारी
र तपाईं Arcadia थिए भने? होइन, होइन पुरातन युनानी महाकाव्य को mythical देश, तर काला सागर रिसोर्ट मा। यो जेनोआ को सडकमा, यहाँ थियो र होटल स्थित छ हामी विशेष ध्यान गर्न चाहनुहुन्छ जो "भिक्टोरिया" (ओडेसा)। यो शानदार जटिल यो हाल को वर्ष मा शानदार Resort बार्सिलोना र टारागोना बाट प्रतिष्ठित गर्न सकिन्छ भनेर सुन्दर जीर्णोद्धार गरिएको छ। समुद्र होटल को धेरै कोठा को Windows देखि देख्न सकिन्छ, र समुद्र तट बस पाँच सय मिटर जानुहोस्। यहाँ प्राप्त गर्न - कुनै समस्या छैन। विमानस्थलमा, ट्याक्सी सवारी देखि, र रेल स्टेसनबाट - trams र trolleybuses।
होटल "भिक्टोरिया" (ओडेसा) अतिथि धेरै महंगा देखि विशेष गर्न कोठा धेरै प्रकार प्रस्ताव। एकल र डबल कोठा वर्ग "अर्थव्यवस्था" सुविधा balconies, केबल, रेफ्रिजरेटर, उत्कृष्ट जुडनार र राम्रो मिनी-रहनसहन, संग शवर "वाई-ईटीए।" उच्च कोठा वातानुकूलित छन्। यो सुइट्स र जुनियर सूट, अतिथि दुई कोठा, एउटै शवर, साथै काम क्षेत्रहरु र आराम गर्न एक ठाउँ पाउनुहुनेछ। तपाईं व्यापार मनोरञ्जन वा को लागि यहाँ आएका कि - तपाईं होटल "भिक्टोरिया" रुचि छौँ।
मूल्यहरु आवास को लागि निम्न छन्: एकल कोठा 370-620 रिव्निया, वर्ग आधारमा। दुई को लागि कोठा - पाँच सय र पचास-छ सय र बीस USD। सुइट्स - 770, र सुइट्स - आठ सय र सत्तरी रिव्निया। होटल दुई सय तीस-पाँच कोठा छ। तिनीहरूलाई थुप्रै समुद्र दृश्य छ।
होटल "भिक्टोरिया" (ओडेसा) vacationers पूर्ण बोर्ड प्रदान गर्न सक्छन्। शैली "बफेट" मा नाश्ता, नियम, कोठा को दर मा समावेश। साथै, क्याफे "कर्मेल" र रेस्टुरेन्ट "भिक्टोरिया" अतिथि एक ला कार्टे मेनु दुवै प्रस्ताव र भोजन (असी देखि लागत एक सय रिव्निया गर्न) र खाने सेट गर्न सक्नुहुन्छ (70-90 UAH।)। यो क्याफे एक गर्मी छत, जहाँ तातो मौसम, तपाईंले बाहिर बस्न सक्नुहुन्छ छ। र tavernas, क्याफेहरू, खाजा बारहरू र अन्य मनोरञ्जन र मनोरञ्जन स्थानहरूको Arcadia सबैभन्दा व्यापक विकल्प मा। होटल मसाज पार्लर, फिटनेस सेन्टर, एक डेस्क छ। त्यहाँ सेमिनार वा व्यवसाय सभाहरू लागि मल्टिमिडिया उपकरण संग धेरै बैठक कोठा, साथै banquets लागि एक विशाल कोठा छन्।
हामी पहिले उल्लेख गरेको छ रूपमा, होटल "भिक्टोरिया" (ओडेसा) समुद्रीतट र मनोरञ्जन क्षेत्र नजिक निकटता मा स्थित छ "Arcadia।" यो धेरै पर्यटकहरु अनुसार यस होटल को मुख्य बोनस छ। केवल समुद्र तट र शहर को मुख्य आकर्षण को एक - Arcadia पछि। लग इन यहाँ, साथै भर ओडेसा तट, मुक्त र पैसा केही रकम भुक्तानी गर्न हुनेछ सूर्य बेड, छाते, पाल, ताजा पानी वर्षा र अन्य सामान लागि भएको छ। यहाँ जीवनको आदर्श - साथै, Arcadia को गर्मी समयमा समुद्र तट, फोम दल र विभिन्न मनोरञ्जन मा शहर को क्लब जीवनको केन्द्र, र discos छ।
होटल "भिक्टोरिया" (ओडेसा, युक्रेन): समीक्षा
सामान्यतया, अतिथि vacationers र पर्यटक प्रशासन, साथै एक उचित मूल्य लागि समुद्र तट गर्न निकटता को आवश्यकता नास्ता, राम्रो इन्टरनेट गति, ध्यान आनन्द। धेरै होटल नवीकरण र सजावट एकदम सरल, तर सधैं सफा र राम्रो छ भन्छन्। वास्तवमा यो केवल दुई तारा छ र सोभियत समयमा बनाइएको थियो - पर्यटकहरु होटल मा सेवा तिनीहरूले अपेक्षा थियो भन्दा अक्सर राम्रो छ भनेर बुझे। खाना स्वादिष्ट र वैविध्यपूर्ण, सधैं तातो पानी छ, ओछ्यान तन्ना नियमित परिवर्तन भयो। कर्मचारीहरु धेरै नै विनम्र, सुखद, लगभग घरेलू वातावरण हो। Vacationers अक्सर थप लागि फिर्ता आउन र होटल साथीहरू र नातेदारहरूले सिफारिस गर्ने प्रतिज्ञा।
विला बेलेभुइ अपार्टमेन्ट3* (ग्रीस / क्रेते) - फोटो र समीक्षा
लामो बीच Resort, श्रीलंका, Koggala फोटो र समीक्षा
यो अरबपति बस धन को आकार मा बिल गेट्स overtaken छ। उहाँले कसले हो?
एउटा सानो भान्सा लागि भान्सा फर्नीचर: व्यावहारिक सल्लाह
ऊफा "शक" मा रेस्टुरेन्ट: gastronomy होट्ल नयाँ प्रवृत्ति
"Rivanola" निर्देशन को आवेदन मा। दबाइ विवरण Analogs
Bolognese सस। लागि नुस्खा